Wednesday . 26 February . 2020
၁၂ နှစ်ကြာ လက်တွဲခဲ့တဲ့ ဇနီးအားလမ်းခွဲပြီး ဇနီးသည်တူမနှင့် ဇာတ်လမ်းသစ်စတင်ခဲ့သည့် ဟာ့ခ်
တရုတ်ကလပ် ရှန်ဟိုင်း SIPG မှာ ကစားနေတဲ့ ဘရာဇီးလူမျိုး တိုက်စစ်မှူး ဟာ့ခ်ဟာ ဇနီးဟောင်းနဲ့ ၁၂ နှစ်ကြာ အိမ်ထောင်ရေးကို အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီး မကြာခင်မှာတင် ဇနီးဟောင်းရဲ့ တူမဖြစ်သူနဲ့ ဇာတ်လမ်းတပုဒ်ကို တရားဝင်စတင်လိုက်ပြီလို့ The Sun သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ဟာ့ခ်ဟာ သူ့ဇနီးဟောင်း အီရန်နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့လမှာ လမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုလမ်းခွဲပြီး မကြာခင်မှာတင် ဟာ့ခ်ဟာ ဇနီးဟောင်းရဲ့ တူမဖြစ်သူ ကာမီလာနဲ့ တွဲနေပြီလို့ သူ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူက တရားဝင် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
“ဟာ့ခ်က ကာမီလာရဲ့ မိဘတွေ၊ အစ်ကိုတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ အမှန်အတိုင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလကတည်းက စတွဲခဲ့ကြတာပါ။ ဒီကိစ္စကို ဖုံးမထားချင်လို့ ဟာ့ခ်ကိုယ်တိုင် တရားဝင် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာပါ” လို့ သူ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူက ဘရာဇီး မီဒီယာတခုကို ပြောပါတယ်။
ဟာ့ခ်ရဲ့ ချစ်သူသစ် ကာမီလာဟာ သူ့ဇနီးဟောင်းနဲ့ အနီးကပ်ဆုံးတူမတဦး ဖြစ်ပြီးတော့ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း အင်စတာဂရမ်မှာ မြင်တွေ့ရပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကာမီလာကလည်း သူ့အဒေါ်ကို တောင်းပန်ကြောင်း သူမရဲ့ တရားဝင် အင်စတာဂရမ်အကောင့်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဒီစာမှာ အရာအားလုံးအတွက် တောင်းပန်ပါတယ်လို့ ပြောဆိုထားခဲ့ပြီး ခံစားချက်ကို မလွန်ဆန်နိုင်တော့တဲ့အဆုံး ဒီလိုအဖြစ်တွေ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ ပြောထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
အီရန်ကတော့ သူ့ခင်ပွန်းဟောင်းနဲ့ သူ့တူမရဲ့ ဇာတ်လမ်းအပေါ် တော်တော်လေး ခံပြင်းနေပုံရပြီး “ဟာ့ခ်ဟာ သူမအပေါ်၊ သူတို့အိမ်ထောင်ရေးအပေါ်နဲ့ သူတို့သားသမီးတွေအပေါ် လေးစားမှု မရှိသူ” လို့ ပြောပါတယ်။
အသက် ၃၃ နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ဘရာဇီး တိုက်စစ်မှူးဟာ ပေါ်တို၊ ဇင်းနစ် စတဲ့ ကလပ်အသင်းတွေမှာ ကစားခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်ပါတယ်။ဟာ့ခ်ဟာ သူ့ရဲ့နာမည်ပြောင်ဖြစ်ပြီး နာမည်အပြည့်အစုံကတော့ ဂျီဗန်နီဒို ဗီရီယာဒီဆိုဆာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟာ့ခ်နဲ့ အီရန်တို့ဟာ အသက် ၁၀ နှစ်အရွယ် အီရန်၊ အသက် ၈ နှစ်အရွယ် တီယာဂိုနဲ့ အသက် ၆ နှစ်အရွယ် အဲလစ် ဆိုတဲ့ သားသမီး သုံးဦးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ဟာ့ခ်ဟာ တရုတ်ကလပ်မှာ တပတ်ကို ပေါင် ၃၂၀၀၀၀ ရရှိနေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုင်ဘက်အိန္ဒိယကစားသမားကို အနိုင်ယူကာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ရွှေတံဆိပ်ဆုတစ်ခု ထပ်မံရယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ကြက်တောင်မယ် သက်ထားသူဇာ
ကမ္ဘာကပေးအပ်တဲ့ ဆုတံဆိပ်ကြီးတစ်ခုကို ထပ်မံ ဆွတ်ခူးလိုက်တဲ့ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် အောင်လ
2020 နိုင်ငံတကာ တစ်နှစ်တာဖိုက်တာ ဆုကို ရရှိသွားပြန်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်
Olyampic ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရရှိရန် လိုအပ်သည့်အမှတ်များစုဆောင်းရရှိဖို့ Uganda နိုင်ငံတွင် ယှဉ်ပြိုင်သွားပါမည့် မြန်မာ့ ကြက်တောင်မယ်လေး သက်ထားသူဇာ